Waxaan ServiMatango C.A. = Services Matango
Servimatango C.A. waxaa shirkad ka go'an in ay caawiyaan dadka iyo ganacsiyada si ay u abuuraan oo sameeyaan ganacsiyo ay online.
Waxaan nahay shirkad ku hawlan shaqadaan oo internetka la xarunta magaalada of Ibarra-Imbabura-Ecuador. Diiradda hawlaha ay ku bixiya adeega kirada server u go'ay u VoIP, martigelin, domain oo xal kale digital u user isticmaalaya internetka.
Waxaan ku taagan nala tartamaya caalami ah oo ay ku mideysan yihiin adeegyada qaababka cusub oo dabacsan iyo hal abuur leh, weheliso adeegga qofka, koox ka mid ah shaqada gaar ah, kooxda u fiican oo ah iskaashi, taageero farsamo iyo mihnadeed adeeg tayo sare leh macaamiisheena.
Waxaan bixinaa macaamiisheena fursad in la abuuro iyo horumarinta ganacsiyo in ay gacan ka kobaca dhaqaalaha iyada oo loo marayo bixinta adeegyada Internet caalami ah oo tayo leh farsamada fiicnayn, oo ay taageerayaan ku takhasusay ugu fiican adduunka,.
Kordhi ah sharafta iyo aqoonsi caalami ah u ah bixinta adeegyo tayo sare leh, safka hore ee kaabayaasha iyo aad u fiican sare ee adeegga iyo tababar tayo aadanaha.
Mararka qaarkood ka hor gobolkii Imbabura; laba aragtida weyn Franklin iyo Nelly go'aansaday inuu aado fikrad aad u fiican: "Tijaabi in Ibarra-Ecuador sameyn kartaa waxyaabo waa weyn".
Oo iyana waxay wadada si ay guulo u bilaabay: fulinta ee 2008, adeeg server ServerVoip.com Rent / kirada; caawinta dadka iyo ganacsiyada si loo abuuro iyo horumarinta ay telefoonka u gaar ah Internet ganacsiga (VoIP) iyo gacanta la Alosip.com, si ay u bixiyaan daqiiqo wicitaanada internet-ka.
Sababo la xiriira koritaanka sii adeegyadan, go'aansaday inuu soo dhiso shirkad oo si sharciya uga diiwaangashan magaca: Adeegyada Matango Company Limited “ServiMatango C.A”.
Hawlaha la bilaabay 2012 iyadoo ujeedku ahaa in bixinta adeegyada kala duwan shaqsiyaadka iyo ganacsiyada si ay u abuuri karaan iyo horumarinta gaar ah ay ganacsi internet meel kasta oo dunida. Waxaa xusid mudan in, kiraysanayso server la VoipSwitch madal si loo fuliyo adeega yeedhayso internetka, Waa laf-dhabar u ah shirkadda.
Healthy deegaanka shaqada
Waxaan, Franklin dhiroonka:
“Waxaan doonayaa in aan tuso yihiin aan, si ay u guulaystaan ​​nolosha ma u baahan tahay in ay haajiraan si ay u dalal kale. Halkan Ecuador ama dalka ay deggan yihiin la drive, Daraasad, go'aanka iyo xamaasad; la isku jecel yahay kuwa aad u hesho marka aad aad dibadda waxaadna ku gaari kartaa wax weyn”.
S Welcome to ServiMatango.com: La kulan Our Team
Waxaan nahay koox xirfadlayaal aad loo tababaray oo gaar ah ee meelo kala duwan: tecnología, software, horumarinta, marketing, e-suuq-, design, taageero farsamo iyo adeegga macaamiisha leh aqoonta loo baahan yahay si uu ula kulmo codsiyada adeegga.
Bixinta talo dhamaystiran, waa qiimaha intaa ku daray in ka dhigaysa macaamiisheena sii wadaan in ay na dooran.
Marketing iyo Iibka
Hello, waxaan ahay Franklin Matango, Waxaan iska kaashaday in ServiMatango oo aan uga dhigeen si loogu caawiyo dadka iyo ganacsiyada si loo abuuro iyo horumarinta ganacsiga online.
“Waxaan bixiyaan talo dhamaystiran shaqsiyaadka iyo shirkadaha in la abuuro iyo horumarinta ganacsiga internet”.
Hi waxaan ahay Nelly Matango, Waxaan iska kaashaday in ServiMatango oo aan uga dhigeen si loogu caawiyo dadka iyo ganacsiyada si loo abuuro iyo horumarinta ganacsiga online.
“Waxaan maareeyo oo waxaan xakameeyo khayraadka lagama maarmaanka u ah hawlaha saxda ah ee ganacsiga internet-ka”.
Hi waxaan ahay Andrea Maldonado, Waxaan iska kaashaday in ServiMatango oo aan uga dhigeen si loogu caawiyo dadka iyo ganacsiyada si loo abuuro iyo horumarinta ganacsiga online.
Hi waxaan ahay Fernando Molina, Waxaan iska kaashaday in ServiMatango oo aan uga dhigeen si loogu caawiyo dadka iyo ganacsiyada si loo abuuro iyo horumarinta ganacsiga online.
“Haddii latalin farsamo ku takhasusay ganacsiga internet”.
Hello, waxaan ahay Jessenian Tequiz, Waxaan iska kaashaday in ServiMatango oo aan uga dhigeen si loogu caawiyo dadka iyo ganacsiyada si loo abuuro iyo horumarinta ganacsiga online.
“In la sameeyo fikrado hal abuur ganacsi online”.
Hi waxaan ahay Angel Cedeño, Waxaan iska kaashaday in ServiMatango oo aan uga dhigeen si loogu caawiyo dadka iyo ganacsiyada si loo abuuro iyo horumarinta ganacsiga online.
“Horumarka Software in qalabayn geedi socodka ganacsi online”.
Adeegyada Our: riix Halkan
Saxiix WARAR XOR AH
Waan ixtiraamaynaa 100% asturnaantaada, no enviamos Spam y tu información nunca será compartida. Bal eeg annaga Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Saxiix WARAR XOR AH. Waan ixtiraamaynaa 100% asturnaantaada, no enviamos Spam y tu información nunca será compartida. Bal eeg annaga Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Waan ixtiraameynaa arimahaaga gaarka ah
Xuquuqda daabacaadda © 2015 Blog ServiMatango CA.